ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: တကယ်ဆို အိုင်ဒီယာပဲ လိုတယ် ..
Posted by ကြည်ကြည် at 1:30 AM
အင်္ဂါဟူး January 20, 2011 at 1:34 AM
သေ ရော ကွယ်.....
မိုးယံ January 20, 2011 at 1:37 AM
တစ်ချို့များတော့ ကျွဲကောသီးခွံနဲ့မှ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်... ၀တ်ရတာလဲ နူးညံ့.. အဲ တပ်ရတာလဲ နူးညံ့တာပေါ့နော်.
ချစ်ကြည်အေး January 20, 2011 at 1:37 AM
ခုတည်းက အော်ဒါ မှာခဲ့ပြီနော် ဒါပဲ....အရောင်စုံ လိုချင်သူတွေအတွက် ဆေးရောင်လေးလည်း ခြယ်ပေးဦး ဟိဟိ :)
ချစ်ကြည်အေး January 20, 2011 at 1:39 AM
မိုးယံ ကျွဲကောသီးက ညည်းတို့လို ဆိုက်ကြီးသမားတွေအတွက်အေ့ တို့များတော့ မူလ ပထမ အုန်းမှုတ်ခွက်ပဲ ဟွန်းးးး :D
ကြည်ကြည် January 20, 2011 at 2:10 AM
ကြည်ကြည် January 20, 2011 at 2:34 AM
တာရှည်ခံလို့ အုန်းသီးကို စဉ်းစားတာပါကွယ်
မမချစ် ဆေးလည်းချယ်ပေးမယ် ဇာပေါက်လိုမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်ပေးမယ်...နော်
ရန်ကုန်ရောက်ရင် mr guitar ဆိုင်ကိုသွား မိန်းကလေးသန့်စင်ခန်းမှာ နေမျိုးဆေးကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ မိန်းကလေး အပေါ်ပိုင်းကိုယ်တစ်ဝက်နဲ့ ခုအဲ့အုန်းမုတ်ခွက်တပ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာ အသီးလေးတွေ ပြထားတယ်
စတော်ဘယ်ရီ ပန်းသီး သင်္ဘောသီး နောက် အုန်း သီး
မှတ်ချက် ...FYI only......
မိုးယံ January 20, 2011 at 4:13 AM
အဲ.... တစ်ခု တတိကြုမိတာလေ။ အဲဒီ အုန်းမှုတ်ခွက် ဆင်မြန်းထားတဲ့ ပဂေးလေးရဲ့ လက်မောင်းက များတို့လောက် ရှိတယ်... အံ့တာပဲ။
တို့းများငယ်ငယ်တုန်းက ရွာအ၀င်လမ်းဆီကနေ.. အဲ ယောင်လို့. တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလိုများ အင်ပေါ့မောင်လေးရယ်များလား ဖြစ်နေသလားလို့.. ထင်တာပါ။
rose of sharon January 20, 2011 at 4:37 AM
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) January 20, 2011 at 4:40 AM
ဒီအမကတော့ လုပ်ရော့မယ်။ အဲဒီလို လုပ်တာ ကောင်းလား။ တကယ်ဘဲ။ တစ်ပုံထဲ တင်ထားရတယ်လို့။းဝ)